यी हुन् मधुमेहका रोगीका लागि भान्सामा पाइने ४ औषधि ! – Khabarhouse
यी हुन् मधुमेहका रोगीका लागि भान्सामा पाइने ४ औषधि !
Khabar house | १७ भाद्र २०७८, बिहीबार ०४:५२ | Comments
एजेन्सी : मधुमेहका रोगीले रगतमा चिनीको मात्रा निय’न्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रणमा आएन भने अन्य स्वास्थ्य समस्याहरु आउने गर्छन् । विशेषज्ञले भान्सामा प्रयोग हुने केही मसलाहरुले खानाको स्वाद बढाउने मात्र होइन, शरीरमा विभिन्न प्रकारका रोगलाई नियन्त्रण पनि गर्छ। विशेषज्ञका अनुसार मधुमेहको टाइप–२ को नियन्त्रणका लागि स्वस्थ जीवनशैलीले अहम भूमिका निर्वाह गर्छ। साथै, भान्सामा पाइने बेसार, दालचिनी, तुलसी जस्ता मसलाहरु मधुमेहका रोगीले नियमित सेवन गर्ने गर्नुपर्छ ।
बेसार : स्वास्थ्य विशेषज्ञका अनुसार बेसारमा करक्युमिन हुन्छ । जसले एन्टी–अक्सिडेन्टको रुपमा काम गर्छ । र, यसले मधुमेहको उपचारमा पनि मद्दत गर्छ । यसका साथै, बेसारमा एन्टी–इन्फ्लेमेट्री गुण हुन्छ । यसले मधु मेहको रोगीलाई राहत दिन्छ ।
मेथी : मेथीको प्रयोग भान्सामा हुने गर्छ । यसको पातलाई सागको रुपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । भने मधुमेहका रोगीका लागि पनि यो लाभदायी हुन्छ। मेथीले पाचन प्रक्रियालाई सहज बनाउने र काब्र्सलाई एब्जर्भ गर्ने क्षमतालाई तेज बनाउँछ । जसले गर्दा रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रण हुन्छ । यसका साथै, कोलेस्ट्रोल कम गर्न मेथीको सेवन गर्नेुपर्छ ।
तुलसी : तुलसीले रोग प्रतिरोधी क्षमताको विकास गर्छ । यसले शरीरलाई मजबुत बनाउँछ । विशेषज्ञका अनुसार तुलसीले रगतमा चिनीको मात्रा कम गर्छ । तुलसीमा पाइने एन्टीअक्सिडेन्टले अक्सिडेटिभ स्ट्रेस कम गर्छ र मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउँछ ।
दालचिनी : दालचिनीमा एन्टी भाइरल, एन्टी ब्याक्टेरियल र एन्टी फंगल जस्ता गुणहरु हुन्छन् । यसका साथै, यसमा हुने एन्टि अक्सिडेन्ट र एन्टी इन्फ्लेमेट्रीको प्रभाव पनि रहन्छ। अध्ययनका अनुसार दालचिनीको सेवनले मेधुमेहको टाइप–२ हुने खतरा कम हुन्छ । दालचिनीमा हाइड्रोक्सी चालकोन पोलिमर पाइन्छ । यसले रगतमा ग्लुकोजमो मात्रा नियन्त्रण गर्छ ।